Ịbụ onye a mụrụ na alaeze nke Chineke | Apg29
Ịbụ onye a mụrụ na alaeze nke Chineke
N'ịbụ nke eluigwe ụmụ amaala bụ ihe dị ebube.
Ee, n'ihi ya, ọ bụ na ụmụ amaala n'eluigwe. Ọ na-apụghị zụtara ego. Ọ bụ dị ka Pọl nwa amaala Rom. Ị enweta ya site nwa, na ịmụ site na nzọpụta Jizọs.
Ọtụtụ mmadụ nwere a ọchịchọ na-abịa alaeze eluigwe nke Chineke. Ma kama niile na-aghọta na onye ga-mụrụ ọzọ, na-echekwa na-enweta n'ebe ahụ.
Achọrọ m na-achọ nkwado nke na-ekwu site n'ihota ihe Bible, kpọmkwem Psalm. 87: 3-4
"Ebube ihe na-asụ gi, obodo nke Chineke. Rehab na Babylon ga m banyere na m na-ekwupụtara mmehie; le Filistia, na Taịa, na Kush, na ndị mụrụ ebe ahụ. "
Rehab na Babilon kwuputa aha Chineke, na Jehova hụrụ ya. All ndị mụrụ na Zion.
Ndị Rom 10: 9-10 na-ekwu, "N'ihi na ọ bụrụ na ị na-ekwupụtara na ọnụ gị na Onyenwe anyị Jizọs na obi gị kwere na Chineke kpọlitere ya n'ọnwụ, ị ga-azọpụta. N'ihi na obi okwukwe bụ ezi omume na-ejikwa onu kwuputa ga-azọpụta. "
Mgbe otu na-enweta ihe na-amụ na-aghọ "ihe e kere ọhụrụ na Kraịst Jizọs (2 Cor. 5:17).
Ps. 87: 5: "Ee, nke Zion ọ ga-kwuru, 'Nke a nakwa na onye a mụrụ ya. Na kasị elu onwe-ya guzosie ike ya. ' "
Amaokwu nke 6: "Ee, mgbe Jehova writeth ndị mmadụ, mgbe ahụ, ọ ga-gua dị ka: 'Nke a onye a mụrụ ebe ahụ.'"
Mgbe Chineke na-atụ anya ndị mmadụ na ya n'eluigwe, ọ na-atụ anya ha na-amụ n'ime alaeze Ya. Ọ bụ naanị ndị na-abịa n'ebe ahụ.
Na Ọrụ Ndịozi. 22: 27-28 converses Col. Laịsias na Paul ọnụ. Colonel jụrụ Pọl, sị:
"Gwa m, Ị bụ onye Rom?"
Paul emegharị, "Ee".
Mgbe ahụ kwuru na ndị agha:
"M nwere ọ na-eri a ego buru ibu ịzụta a nnwere onwe."
"M na-Otú ọ dị, nwere ugbua site nwa."
N'ịbụ nke eluigwe ụmụ amaala bụ ihe dị ebube. Mgbe onye a mụrụ ọzọ site na nzọpụta ga-enweta nkewapụ n'ụwa. Otu ahụ chere na "n'ụwa a, m nwere bụghị m n'ụlọ", dị ka ọ na-ekwu na ihe ochie song. Na e zoro aka na song kwuru n'ihu: "Ọ dịghị, m chọrọ bụ ka heaven mba."